राजस्थान रोयल्सको रोमाञ्चक जीतमा सञ्जु नायक - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Editor-Picks राजस्थान रोयल्सको रोमाञ्चक जीतमा सञ्जु नायक
युएइ । आइपीएलअन्तर्गत गएराति सम्पन्न खेलमा किंग्स इलेभेनविरुद्ध राजस्थान रोयल्सले रोमान्चक जित निकालेको छ । रनको वर्षा भएका उक्त खेलमा राजस्थानले पञ्जाबको २२३ रनको लक्ष्य भेटाएको हो । निर्धारित २० ओभरमा पञ्जाबले मात्र २ विकेट गुमाएर बनाएको २२३ रनको लक्ष्य राजस्थानले १९ ओभर ३ बलमा भेटाएको थियो ।
२२३ रन चेन्ज गर्न मैदान छिरेको राजस्थानले ओपनर जोस बोटलरलाई सुरुमै गुमाएको थियो । त्यसपछि आएका सञ्जु सामसुङले विस्फोटक ब्याटिङ गरेर टिमलाई जितको आधार खडा गरेका थिए । सञ्जुले ४२ बलमा ७ छक्का र ४ चौकाको सहयोगमा ८५ रनको योगदान दिए । उनलाई कप्तान स्टिपेन स्मितले साथ दिएका थिए । उनले पनि २७ बलमा अर्धशतक पूरा गरेका थिए । राजस्थानका लागि राहुल टिवेटेवालाले ३१ बलमा ५३ रन बनाएपछि राजस्थान जीतको नजिक पुगेको थियो । अलराउन्डर जाफर आर्चरले ३ बलमा १३ रन बनाएपछि राजस्थानले विजय लक्ष्य भेट्यो ।
पञ्जाबका लागि महोम्मद सामीले ३ विकेट लिएका थिए । किफायती बलिङ गरेका रवि विस्नोइको नाममा २ विकेट रह्यो ।
प्रशासकीय अधिकृतको हाजिर नहुँदै सरुवा !
Exclusive सुजीतकुमार झा - October 20, 2020
जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा आठौं कार्यालय प्रमुखको रुपमा सरुवा भई आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिर नहुँदै सरुवा भएका छन् । असोज १ गते संघीय मामिला...
कोरोनाविरुद्ध लडाइँ तीव्र बनाऊ
राजधानी समाचारदाता - June 11, 2020
कोरोना महामारीको संक्रमण पूर्वानुमान गरेभन्दा निकै तीव्र र व्यापक हुँदै जाँदा सरकारले गरेका तयारी फिक्का हुँदै गएको आमरूपमा महसुस हुँदै गएको छ । छिमेकी...
रासस - July 3, 2020
Not-to-be-missed विजय नेपाल/ दिल तामाङ - March 11, 2020
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - February 25, 2020
काठमाडौं । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले १५ फागुनमा विवाह गर्दै छिन् । अर्की अभिनेत्री आँचल शर्माले पनि यही २९ फागुनमा आफ्नो विवाह गर्ने...
Exclusive महेश्वर गौतम - August 28, 2020
काठमाडौं । सरकारी निकाय तथा कार्यालयहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम अत्यधिक बढ्दै गएको पाइएको छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, मन्त्री...
सौजन्य राजधानी समाचारदाता - July 10, 2020